Ogaden News Agency (ONA) – Hogaanka Warfaafinta JWXO oo ku Baraarujiyay Jaaliyadda Doxa Wax-qabad
Hogaanka Warfaafinta JWXO oo ku Baraarujiyay Jaaliyadda Doxa Wax-qabad
Maamulka Jaaliyadda Doxa ayaa shir hawleed isugu yimid ay ku falanqeeyeen wixii u qabsoomay sanadkii tagay iyo qorshaha sanadka cusub ay ku hawlgali lahaayeen.
Wacdigii diiniga ahaa ka dib, Hogaanka Warfaafinta JWXO mudane Xuseen Nuur ayaa usoo bandhigay jaaliyadda warbixin ku saabsan xaaladda guud ee halganka uu marayo hude iyo dibadba iyo hiigsiga sanadka cusub ee JWXO.
Gudoomiyaha HWF ayaa si fiican u faahfaahiyay dhaq-dhaqaaqa ka jira gumaysiga dhexdiisa iyo mucaaradka ku kacsan xukunka Wayaanaha TPLF. Warbixintaa ka dib, wuxuu HWF kala hadlay maamulka Jaaliyadda in la xoojiyo ururnimada oo qofwalba uu waajibka saaran u guto si xilkasnimo ah.
Waxaa kaloo hadal dheer ka jeediyay madasha shirka hogaanka dhaqaalaha jaaliyadda oo ka warbixiyay sanadkii tagay wixii laqabtay iyo dhaliilaha jira sidii loo gufayn lahaa. Wuxuu si aad ah ugu dheeraaday in la raaco xadiithkii Rasuulka CS ee ah in qofka hawsha uu bilaabo haba yaraatee ee khayrka leh inuu joogteeyo.
Xubnihii kalee kasoo qaybgalay ayaa sidoo kale ra’yigooda ku darsaday, gaar ahaan arimaha quseeya dhalinyarada iyo sidii loo wacyigalin lahaa.
Go’aano dhaxagal ah ayaa la qaatay oo sanadka cusub haduu Eebe idmo lagu hawlgali doono.